AYA International Money Transfer Service - AYA Bank
Home > Products > Remittances > AYA International Money Transfer Service
The safe and reliable way of sending your hard earned money to your loved ones in Myanmar from abroad. Transfer from sender in foreign countries to beneficiaries in Myanmar through agency relationships (Banks and Non-banks) with AYA Bank.
MALAYSIA International Money Express (IME) Send Location
All over Malaysia – where there is IME
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ IME ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားသော နေရာတိုင်းမှ ငွေလွှဲနိုင်ပြီး နီးစပ်ရာဧရာဝတီဘဏ်ခွဲ တိုင်းတွင် ငွေသားထုတ်ယူ၍ သော်လည်းကောင်း စာရင်းတွင်ထည့်သွင်း၍သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Maybank Money Express (MME)
All over Malaysia – where there is Maybank
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Maybank ဘဏ်ခွဲတိုင်းမှ ငွေလွှဲနိုင်ပြီး နီးစပ်ရာဧရာဝတီဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် ငွေသား ထုတ်ယူ၍ သော်လည်းကောင်း စာရင်းတွင်ထည့်သွင်း၍သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Akbar Money Transfer Service (Qremit)
25, Jalan Medan Pasar, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia
60, Jalan Munshi Abdullah, 75100 Melaka, Malaysia
AYA Branches and other private banks
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Akbar Money Transfer service မှလည်း ဧရာဝတီဘဏ်သို့ ငွေလွှဲပို့နိုင်ပြီး နီးစပ်ရာဧရာဝတီဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် ငွေသားထုတ်ယူ၍သော်လည်းကောင်း စာရင်းထဲထည့်သွင်း၍ သော်လည်း ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Akbar Money Transfer service ၏လိပ်စာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်
All over Malaysia – where there is CIMB
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ CIMB ဘဏ်ခွဲတိုင်းမှ ငွေလွှဲနိုင်ပြီး နီးစပ်ရာဧရာဝတီဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် ငွေသားထုတ် ယူ၍သော်လည်းကောင်း စာရင်းတွင်ထည့်သွင်း၍ သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
AYA – DBS Bill Payment Service
More Details >> Send Location
DBS/POSB Internet Banking (via web or mobile application)
AYA Branches (credit directly to your account at AYA Bank)
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ DBS/POSB Bank ၏ Internet သို့ Mobile Banking မှတဆင့် ဧရာဝတီဘဏ်ရှိ ငွေစာရင်းအား ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ IME ငွေလွှဲကိုယ်စားလှယ်မှ အောက်ပါလိပ်စာတို့တွင် ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။
5001 Beach Rd #01-05/06/07 Golden Mile Complex S199588 / Tel:6296-3236
Block 301 Ubi Avenue 1 #01-275 S400301 / Tel:6841-3015
377 Woodlands Road S677934 / Tel:6764-2036
1 Park Road #01-78G People’s Park Complex S059108 / Tel:6536-8896
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရှိ IME ငွေလွှဲကိုယ်စားလှယ်မှ အောက်ပါလိပ်စာတွင် ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။
Lot #03-31A, 2nd Floor Plaza Seria, Seria-Kuala Belait, Negara Brunei Darussalam / Tel: +673 3220121
THAILAND Bangkok Bank Worker’s Remittance
ယိုးဒယားနိုင်ငံရှိ Bangkok Bank ဘဏ်ခွဲများမှတဆင့် ဧရာဝတီဘဏ်သို့ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ငွေလက်ခံသူအနေဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူ၍သော်လည်းကောင်း စာရင်းတွင်ထည့်သွင်း၍သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
All over Thailand – where there is Bangkok Bank Branch
Western Union နိုင်ငံပေါင်း (၂၀ဝ) ကျော်ရှိ Western Union ငွေလွှဲကိုယ်စားလှယ်များမှ ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲများသို့ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Worldwide – located in over 200 countries
SWIFT Telegraphic Transfer Service
A very fast, safe and reliable way of transferring money between two persons or entities anywhere in the world through use of AYA’s wide correspondent relationships and the SWIFT network.
Outward SWIFT Telegraphic Transfer
Sending money to beneficiaries outside Myanmar from your account with AYA Bank
Inward SWIFT Telegraphic Transfer
Receiving funds to your account in Myanmar from senders outside Myanmar
Very fast, the recipient is able to receive the funds quickly usually within 24 hours
Very safe with practically no risk of loss as bank uses their correspondent banking relationship to conduct settlement
Reliability ensured as banks have the necessary internal infrastructure and send and receive messages through authenticate SWIFT messages to ensure that the transfer is executed inatimely fashion and to good order
Payment order isaform of payment settlement to individual, company and associations. It can be purchased at any AYA branches. Payment order is designed asanormal payment order to payaparticular amount forathird party that is notaBank.
Legality of P.O service
Available to use at every AYA branches
Guarantee payment to beneficiary officially
Transparent and clear channels for dispute handling
USD 1360 1365
EURO 1430 1445
SGD 960 965
Exchange Rate at February 27th 2017 1 day @ Ayeyarwaddy Bank